Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Italiana Emerson Palmieri Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray izay fantatry ny anarany malaza; "Emer". Ny Emerson Palmieri tantaran-tantaran'olon-tsy fantatra momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fomba filalaovana azy avokoa ny rehetra saingy vitsy no mieritreritra ny Bio Bio Emi izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Emerson Palmieri Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Emerson Palmieri dos Santos, fantatra amin'ny hoe Emerson Palmieri na Emerson fotsiny no teraka tamin'ny 3rd August 1994 tany Santos, São Paulo, Brezila. Teraka tamin'ny reniny italiana Eliana Palmieri ary papa breziliana, Reginaldo Alves dos Santos.
Emerson dia manana razambe italianina eo amin'ny reniny ary olom-pirenena Italiana nanomboka tamin'ny volana 2017. Nihalehibe niaraka tamin'ny zokiny lahy izy, Giovanni, izay koa mpilalao baolina kitra izay milalao tahaka azy. Emerson dia mpilalao baolina kitra Anglisy hatramin'ny 15 taona.
Izy no nanombohany voalohany an'i Santos tamin'ny taonan'ny 16 taorian'ny nahatongavany tany amin'ny rafitra tanora ary tamin'ny 18 dia nanangana ny tenany ho mpikambana ao amin'ny ekipa voalohany izy, misaotra azy nitombo hatrany amin'ny ambaratonga ambony indrindra amin'ny lalao baolina kitra. Nanomboka nitety azy toy ny antsantsa ny scouts satria nahazo ny 2013 Copa Sao Paulo de Futebol Junior ho an'ny pejy Santos U20. Mpitsikilo avy any Palermo izy io, ary nentiny nandeha tany Eoropa. Ny safidiny ho an'ny italiana dia nisaotra ny maman-dry zareo avy any amin'ny firenena. Nampiasa izany fahafahana izany i Emerson mba hanakaikezana bebe kokoa ny fianakaviany.
Ny klioba Italiana Palermo, izay nampindram-bola azy noho ny vanim-potoana 2014 / 15 miaraka amin'ny safidy hividy. Mampalahelo fa vitsy ny làlana azony hamirapiratra ary lavitry ny fisehoan-javatra sivy monja dia tsy noheverin'ny klioba ny safidin'ny fifanarahana maharitra.
Ny faharesen'i Palermo dia ny tombom-barotr'i Roma satria nalain'izy ireo tamin'ny taona 21 / 2015 ny taona 16 taona. Izy no nandany ny fotoanany voalohany tao amin'ny Stadio Olimpico ho toy ny fanadihadiana an'i Lucas Digne, saingy nampiseho ny fanomezan-toky ampy fa ny fifanoloran-tenany dia nitatra nandritra ny vanim-potoana hafa. Izany no fotoana Antonio Conte's Niditra i Chelsea. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Emerson Palmieri Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Mora loatra ny hianjady amin'ny fitiavana ary ho tratra ao anaty tafio-drivotry ny fientanentanana amin'ny fanomanana fiainana 'miaraka mandrakizay'. Izany no an'i Emerson Palmieri izay niaraka tamin'ny fitiavam-pitiavany i Isadora Nascimento hatramin'ny naha-zatovo azy.
Emerson dia nihaona tamin'i Isadora Nascimento, ilay sipany lava be tany Brezila, ary efa niara-nanohana ny mpivady hatramin'izay. Ny mpankafy baolina kitra dia mahita fa tena mora ny mijery ny firehetan'ny Latina, izay niaiky fa tena malaza be i Emerson mijery azy.
Hoy izy taloha: "Rehefa mandeha any amin'ny lalao aho dia tena mahery tokoa, adala aho, misaotra ny fitiavako ny fiainako. Tia baolina foana aho saingy tsy dia be loatra ny mijery. "
Emerson, izay manana mpanaraka ny Instagram 200,000 ary mamoaka tsy tapaka ny sarin'ny fitiavan'ny fiainany izay toa maneho fitiavana be sy mirehareha amin'ny zava-bitan'ny lehilahy.
Isadora indray naneho hevitra momba ny sarin'i Emerson milaza hoe: "Tena tia mamy izy, tena mamy. Efa niteny zavatra mahafinaritra foana izy hatramin'izay, dia mahatonga ny tsy ampoizina izay tsy hitranga na oviana na oviana mety hitranga ary mitondra ahy tsara. Mahafaly ahy sy ny fianakaviako izy. Tiako foana ianao, Emerson! "
Emerson Palmieri Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana manokana
Emerson Palmieri dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Ny tanjon'i Emerson Palmieri: Izy dia mamorona, be fitiavana, malala-tanana, mafana fo ary faly.
Ny Fahalemen'i Emerson Palmieri: Afaka miavonavona izy, manambany tena, manolo-tena, kamo sy tsy misy dikany.
Inona no tian'i Emerson Palmieri: Voalohany, tiany ny fifandraisany amin'i Isadora. Emer koa dia tia ny teatra, maka fialantsasatra, mividy zavatra sarobidy amin'i Isadora, loko mamirapiratra ary mifalifaly amin'ny namana.
Ny tsy fitiavan'i Emerson Palmieri: Tsy niraharaha, niatrika ny zava-misy sarotra ary tsy noraisina toy ny mpanjaka.
Na dia mbola kely aza izy, fa i Emerson dia mpitarika voajanahary natanjaka. Marina izany. Izy dia mampihetsi-po, mamorona, matoky tena, manan-danja ary tena sarotra ny manohitra. Emerson dia afaka manatratra izay tadiaviny any amin'ny sehatra rehetra iainany. Misy hery manokana ho azy "Mpanjakan'ny ala" toerana.
Emerson Palmieri Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Niara-nilalao teo akaikin'i Neymar
Eny, araka ny voalaza terỳ aloha, teraka tany Santos, Sau Paulo i Emerson ary nanatevin-daharana ny tanora Santos napetraka tao amin'ny 2009. Fantatrao ve? ... Nandany enim-bolana niaraka tamin'ilay klioba izy ary niara-nilalao Neymar nandritra ny fotoanany. Nanomboka teo, dia naka zavatra iray na roa avy amin'ny Zaza Golden Golden i Emerson.
Emerson Palmieri Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Emerson dia avy amin'ny fianakaviana ambony iray ao amin'ny lalaon'ny baolina kitra. Raha ny marina dia tsy izy irery no mpilalao baolina kitra amin'ny anaran'ny Palmieri. Mipoitra ny baolina kitra ao amin'ny fianakaviany.
Ny zokiny lahy zokin'i Emerson, teraka tamin'ireo ray aman-dreny tamin'ny fotoana nanoratana azy, dia milalao ho an'i Fluminense any Brezila ho an'ny Number 6. Miasa toy ny havia havia koa izy ary nipoitra ny fisehoan'ny 100 amin'ny klioba Breziliana.
I Giovani sary etsy ambony dia dimy taona noho ny zandriny lahy.
Emerson Palmieri Childhood Story Plus Untold Biography Facts -His Style
Emmer dia mpilalao baolina kitra be mpampiasa. Azony atao ny milalao amin'ny toeran'ny havia na havia ary efa nofenoina an-kavanana mihitsy aza tamin'ny fotoanany tao Roma.
Tian'i Emerson ny mandroso na dia mpiaro aza. Fantany tsara ny fiakarany sy ny fanoherany ny lehilahy mifanohitra aminy. Izany dia mampiseho ny fahaizan'ny hafainganam-pandehany, ny fandanjalanjana ary ny fahaiza-manao samba toy ny dingana.
Na dia mijoro ao amin'ny 5ft 9in aza izy dia tsy matahotra ny hampiasa ny sariny ho tombontsoany. Emerson dia mahavita mampirotaka ny ankilany amin'ny alahelony.
Amin'ny faran'ilay faritra, Emer dia tsara ihany koa amin'ny toe-javatra iray monja amin'ny alàlan'ny fampiakarana azy amin'ny toe-javatra sarotra. Talohan'ny nahatongavany tany Chelsea, ny lisitry ny fiarovan-tenany dia nifanaraka tamin'ny tsara indrindra tamin'ny Series A.
Emerson dia nanolo-tena an'i Brezila tamin'ny latsaky ny 17 nandritra ny lalao baolina kitra 2011 Amerika Atsimo teo ambany 17 ary nandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany 2011 FIFA U-17. Mpanafaka tsy misy fepetra izy nandritry ny fifanintsanana roa tonta, ka nahitana tanjona iray hanohitra an'i Chile tamin'ny 16 March 2011.
Tamin'ny volana Martsa 2017, taorian'ny nahazoana ny zom-pirenena Italiana, dia notaterin'i Emerson, tarika italiana, Gian Piero Ventura, i Emerson tamin'ny fikasana hanova ny fifaneraserana iraisam-pirenena amin'i Italia. Ny nofinofiny nofinofy dia tonga tamin'ny andro 29 tamin'ny mars 2017.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Emerson Palmieri momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Daty efa namboarina: 14 septambra 2020
Daty efa namboarina: 26 may 2019